Wararka Maanta: Arbaco, Jan 10, 2018-Safiirkii Soomaaliya ee Iskutaga Imaaraadka Carabta oo xilka wareejiyay
Arbaco, Janaayo, 10, 2017 (HOL) - Safiirkii Soomaaliya ee Iskutaga Imaaraadka Carabta C/qaadir Shiikheey ayaa munaasabad ka dhacday magaalada Abu Dubai waxaa uu xilkii safaarada si ku-meel-gaar ah ugu wareejiyay Axmed Ducaale Maxamed.
Ka qeybgalayaashii munaasabada sagootinta safiirka ayaa ka mahadceliyay wax qabadkii safiirka muddadii uu joogay safaarada, iyaga oo sheegay in uu noqonayo safiirkii ugu horeeyay ee ka taga dhisme ay leedahay safaarad Soomaaliyeed dalka Iskutaga Imaaraadka Carabta.
Safiir Shiikheey ayaa lagu tilmaamay in uu noqonayo safiirkii ugu horeeyay ee soo mara dalka Iskutaga Imaaraadka Carabta oo xilka wareejiya isaga oo ka tagaya safaarad Soomaaliyeed oo lagu shaqeyn karo.
Safaarada Soomaaliya ee Iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa la aas-aasay sanadkii 1973kii waxaana isaga danbeeyay oo soo maray ilaa 8 safiir, hasse ahaatee safiirka xilka ka tagay ayaa lagu amaanay in uu noqonayo shaqsigii ugu horeeyay ee ku guuleysta dhismaha safaarad Soomaaliyeed.
Sii hayaha safaarada Soomaaliya ee xilka la wareegay Axmed Ducaale Maxamed ayaa ku amaanay safiir Shiikheey uu taariikhda iyo dhaxalka uu uga tagay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Iskutaga Imaaraadka, isaga oo balanqaaday in uu halkiisa ka sii wadi doono howlihii uu qabtay C/qaadir Shiikheey.
Isbadalka cusub ee safaarada Soomaaliya ee Abu Dubai ayaa qeyb ka noqoneysa isbadal horey sidan oo kale looga sameeyay safaaradaha Soomaaliya ee dalalka Qatar, Kuwait iyo Kenya
Dalka Isutaga Imaaraadka ayaa waxaa ku dhaqan Jaaliyada ballaaran oo Soomaaliyeed oo intooda badan halkaa ku heysta ganacsiyo kala duwan taasoo muhiim ka dhigeysa in jirto safaarad Soomaaliyeed.